Bartilmaameedka Macnaha Guud: Jawaabta Goobaha Xayeysiiska ee Amaanada leh? | Martech Zone
Walaacyada sii kordhaya ee maanta, oo ay weheliso burburka buskudka, macnaheedu waa suuqleydu hadda waxay u baahan yihiin inay soo bandhigaan ololeyaal shakhsi ahaaneed, waqtiga dhabta ah iyo qiyaasta Muhiimad ahaan, waxay u baahan yihiin inay muujiyaan naxariis oo ay ku soo bandhigaan farriimahooda bey'ado ammaan ah. Halkani waa halka awoodda bartilmaameedka macnaha guud ku soo galay.
Bartilmaameedka macnaha guud waa hab lagu bartilmaameedsado dhagaystayaasha ku habboon iyada oo la adeegsanayo ereyada muhiimka ah iyo mowduucyada laga soo qaatay waxyaabaha ku jira agabka xayeysiiska, ee aan u baahnayn cookie ama aqoonsi kale. Waa kuwan qaar ka mid ah faa'iidooyinka muhiimka ah ee bartilmaameedka macnaha guud, iyo sababta ay u tahay waajib-lahaanshaha suuq-yaqaan kasta oo xariif ah ama xayeysiiya.
Bartilmaameedka Macnaha Guud ayaa Bixinaya Macnaha Guud Qoraal Ahaan
Runtii matoorada bartilmaameedka macnaha leh ee wax ku oolka ahi waxay awood u leeyihiin inay ka baaraandegaan dhammaan noocyada maaddooyinka ee ku jira bogga, si loo siiyo hagitaan run ah oo 360-degree ah oo ku saabsan macnaha macnaha bogga.
Bartilmaameedka macnaha guud wuxuu falanqeeyaa qoraalka, maqalka, fiidiyaha iyo sawirada si loo abuuro qeybaha bartilmaameedka macnaha guud leh oo markaa la jaan qaadaya baahiyaha xayeysiista ee gaarka ah, si xayeysiintu ugu muuqato jawi ku habboon oo ku habboon. Marka tusaale ahaan, maqaal war ah oo ku saabsan Australian Open ayaa laga yaabaa inuu muujiyo Serena Williams oo xiran kabaha isboorti ee ay wadaagaan Nike, ka dibna xayeysiinta kabaha isboortiga ayaa ka dhex muuqan kara jawiga la xiriira. Tusaalahan, bay'addu waxay ku habboon tahay sheyga.
Qaar ka mid ah aaladaha bartilmaameedka duruufaha durugsan xitaa waxay leeyihiin awooda aqoonsi fiidiyoow, halkaas oo ay ku falanqeyn karaan qaab kasta oo ka kooban fiidiyowga, aqoonsashada astaamaha ama alaabada, aqoonsadaan sawirada summada leh, qoraalka maqalka oo ku wargelinaya dhammaantood, si loo helo jawi ku habboon suuqgeynta gudaha iyo hareeraha qaybtaas ee ka kooban fiidiyowga. Tan waxaa ka mid ah, muhiimad ahaan, dhisme kasta oo ka dhex jira fiidiyowga, oo kaliya ma ahan cinwaanka, thumbnail, iyo tags. Noocaan falanqaynta ah ayaa sidoo kale lagu dabaqaa waxyaabaha maqalka ah iyo sawirada, si loo hubiyo in goobta guud ahaan ay astaan ​​u tahay amaan.
Tusaale ahaan, qalab bartilmaameed macno leh ayaa falanqeyn kara fiidiyow ay ku jiraan sawirro sumad beero ah, lagu garto iyada oo loo marayo maqalka & fiidiyowga in ay tahay bey'ad aamin ah, kuna wargalinaysa suuqleyda in ay tahay kanaal ku habboon iyo suuqgeynta waxyaabaha ku saabsan beerka si ay ugu muuqdaan dhagaystayaasha bartilmaameedka la xiriira.
Qalabka duugga ah ayaa kaliya falanqeyn kara cinwaanada fiidiyowga ama maqalka, mana ku xeel dheer sawir, macnaha xayeysiisku wuxuu ku dambeyn karaa jawi aan habboonayn. Tusaale ahaan, cinwaanka fiidiyowga wuxuu noqon karaa mid aan waxba galabsan oo loo arkaa inuu 'badbaado' u yahay aalad duug ah oo macno leh, sida 'Sida loo sameeyo biir weyn' si kastaba ha noqotee waxa ku jira fiidiyowga laftiisa ayaa si xun u habboonayn, sida fiidiyoowga da'yarta biir - hadda xayeysiinta sumadda leh ee deegaankaas ka jirta waa wax aan suuqgeyn hadda awoodin.
Xalalka qaarkood waxay dhisteen suuq-warshadeed markii ugu horeysay oo awood u leh xulashada la-hawlgalayaasha tikniyoolajiyadda si ay ugu dhejiyaan algorithms-kooda gaarka ah oo ah lakab dheeri ah oo bartilmaameed ah, waxayna bixiyaan noocyo ka ilaaliya cunsuriyada, ku habboonaanta ama sunta sunta ah - taas oo loo adeegsan karo si loo hubiyo amniga sumcadda iyo ku habboonaanta si sax ah ayaa loo maareeyaa.
Bartilmaameedka macnaha guud wuxuu kobciyaa bay'ada summada leh
Bartilmaameedka macnaha guud wuxuu kaloo hubinayaa in macnaha uusan si xun ula xiriirin wax soo saar, marka tusaalaha kor ku xusan, wuxuu hubin lahaa in xayeysiiska uusan muuqan haddii maqaalka uu ahaa mid taban, warar been abuur ah, eex siyaasadeed ama macluumaad khaldan. Tusaale ahaan, xayeysiiska kabaha tennis-ka ma muuqan doono haddii maqaalka uu ku saabsan yahay sida kabaha tennis-ka ee xun u u xanuun u keenaan.
Qalabkani wuxuu u oggolaanayaa habab ka casrisan ereyada muhiimka ah ee u dhigma, oo u oggolaanaya suuqleyda inay magacaabaan bey'adaha ay rabaan inay ku daraan, iyo tan muhiimka ah, kuwa ay doonayaan inay ka reebaan, sida waxyaabaha ay ka midka yihiin adeegsiga hadallada nacaybka, xisbiyada xagjirka ah, siyaasad sarreysa, cunsuriyadda, sunta, Tusaale ahaan, xalalka sida 4D waxay awood u siineysaa ka reebitaanka tooska ah ee noocyada calaamadaha noocan ah iyada oo loo marayo isdhexgalka gaarka ah ee lala yeesho wada-hawlgalayaasha takhasuska leh sida Factmata, iyo calaamadaha kale ee macnaha guud ayaa lagu dari karaa si loo xoojiyo amniga meesha xayeysiintu u muuqato.
Qalab lagu beegsanayo macnaha guud oo la isku halleyn karo ayaa falanqeyn kara waxyaabaha kuugugana digi kara xadgudubyada badbaadada sumcadda sida:
Siyaasad sarreysa ama eex siyaasadeed
Wararka been abuur ah
Xisbi ahaan Hyper
Bartilmaameedka macnaha guud ayaa ka waxtar badan adeegsiga Kukiyada-saddexaad
Bartilmaameedka macnaha guud ayaa dhab ahaan la muujiyey inay ka waxtar badan tahay beegsiga isticmaalka cookies-ka dhinac saddexaad. Xaqiiqdii, daraasadaha qaarkood waxay soo jeedinayaan bartilmaameedka macnaha guud inuu kordhin karo ujeedka iibsiga 63%, ka soo horjeedka dhagaystayaasha ama beegsiga heerka kanaalka.
Isla daraasadihii la helay 73% macaamiisha Dareemo xayeysiis ku habboon oo la xidhiidha dhammaystirka guud ahaan waxyaabaha ama khibradda fiidiyowga Waxaa intaa sii dheer, macaamiisha lagu bartilmaameedsaday heerka macnaha guud waxay u badnaayeen 83% inay kugula taliyaan sheyga xayeysiinta, marka loo eego kuwa lagu bartilmaameedsaday dhagaystayaasha ama heerka kanaalka.
Guud ahaan sumcadda sumcadda ayaa ahayd 40% ka sareeya loogu talagalay macaamiisha loogu talagalay heerka macnaha guud, iyo macaamiisha loo adeegsaday xayeysiiska macnaha guud ku warramay inay wax badan ka bixin doonaan summad. Ugu dambeyntiina, xayeysiisyada ugu habboon ee macnaha guud leh waxay keeneen 43% hawlgallo neerfaha ka badan
Tani waa sababta oo ah in macaamiisha lagu gaadho maskaxda saxda ah daqiiqad ku habboon waxay ka dhigeysaa xayeysiiska si wanaagsan, sidaa darteedna waxay hagaajineysaa ujeedo iibsi oo aad uga badan xayeysiis aan khusayn macaamiisha ku wareegsan internetka.
Tani waa wax la yaab leh. Macaamiisha waxaa lagu duqeynayaa suuqgeyn iyo xayeysiin maalinle ah, iyagoo hela kumanaan fariimo maalin kasta. Tani waxay uga baahan tahay inay si hufan u shaandheeyaan fariimaha aan khuseynin si dhakhso leh, sidaa darteed farriimaha la xiriira oo keliya ayaa loo soo maraa tixgelin dheeraad ah. Waan arki karnaa macaamilkaan ka careysan duqeynta oo ka tarjumeysa isticmaalka sii kordhaya ee xayiraadaha xayeysiinta. Si kastaba ha noqotee, macaamiisha ayaa sifiican u aqbalaya farriimaha laxiriira xaalada ay hada kujiraan, iyo bartilmaameedka macnaha guud wuxuu kordhinayaa suurtagalnimada in fariin ay iyaga khusayso xilligan.
Dhamaystirka Bartilmaameedka Macnaha Guud Barnaamij
Dareenka ugu badan ee kuwa ka careysiiya luminta cookie-ka ayaa ah waxa tan macnaheedu u noqon karo barnaamij ahaan. Si kastaba ha noqotee, bartilmaameedka macnaha guud wuxuu fududeeyaa barnaamij, illaa heer ay ka sarreyso waxtarka buskudka. Tani waa war u wanaagsan suuqleyda, iyada oo la tixgelinayo warbixintii dhaweyd ee la helay dib-u-habeynta barnaamijyada iyada oo lagu tiirsan yahay cookies-ka xad-dhaafka ah ee la gaarsiiyo 89%, soo noqnoqoshada hoos udhaca 47%, iyo beddelka hoose ee muujinta iyo fiidiyowga 41%.
Si kastaba ha noqotee, bartilmaameedka macnaha guud wuxuu sifiican ugu shaqeeyaa barnaamijka maxaa yeelay waxaa loogu adeegi karaa waqtiga-dhabta ah, cabir ahaan, jawi aad u khuseeya (oo amaan ah), marka loo eego barnaamijyada ay shidayaan cookie-ka saddexaad. Xaqiiqdii, dhawaan ayaa la soo wariyay in xaaladdu si dhab ah ugu habboon tahay barnaamij ahaan nooc kasta oo kale oo bartilmaameed ah.
Nidaamyada cusub ayaa sidoo kale bixiya awoodda lagu liqi karo xogta kooxda koowaad ee ka socota DMP, CDP, xayeysiisyada xayeysiinta, iyo ilo kale, kuwaas oo mar lagu quudin jiray mashiinka sirdoonka, ay soo saaraan aragtiyo macno leh oo lagu dabaqi karo xayeysiinta barnaamijka.
Waxaas oo dhami waxay ka dhigan yihiin isku-dhafka bartilmaameedka macnaha iyo xogta qeybta koowaad waxay siineysaa magacyada fursad ay ku abuuraan xiriir dhow macaamiishooda iyagoo ku biirinaya waxyaabaha dhabta ah ee ku mashquulsan.
Bartilmaameedka Macnaha guud wuxuu furayaa Lakab cusub oo Sirdoon ah oo loogu talagalay Suuqleyda
Jiilka soo socda ee aaladda caqliga macnaha guud leh waxay u furi karaan fursado awood badan suuqleyda si ay si wanaagsan uga faa'iideystaan ​​isbaddelada macaamiisha isla markaana u xoojiyaan qorsheynta warbaahinta iyo cilmi baarista, dhammaantood iyagoo siinaya aragti qoto dheer oo ku saabsan isbeddellada iyo waxyaabaha ku habboon.
Bartilmaameedka macnaha guud ma aha oo kaliya inuu kordhiyo ujeedka iibsiga, sidoo kale wuxuu ku sameeyaa qarash yar, taasoo ka dhigeysa qarashka ku-soo-baxa cookie-ka ee beddelaadda mid aad u hooseeya - guul muhiim u ah jawiga dhaqaale ee hadda jira.
Oo waxaan bilaabeynaa inaan aragno aalado bartilmaameed badan oo macno leh oo ka faa'iideysanaya xogta kooxda-koowaad ee wixii taageero ah ee DMP, CDP, ama Ad Server, waxaan hadda bilaabi karnaa inaan aragno sida tan loogu beddeli karo sirdoon xeel dheer oo awood u leh duruufaha omnichannel ee waxqabadka leh, badbaadinta suuqleyda waqtiga liita. iyo xayeysiiyayaashu waqti iyo dadaal aad u fara badan ayagoo abuuraya isla markaana adeegsanaya macnaha guud ee hal mar wada socda. Tani waxay markaa hubineysaa gaarsiinta farriinta ugu habboon ee jawi nabadgelyo leh oo muuqaal ah oo muuqaal ah, fiidiyoow, hooyo ah, maqal ah iyo TV wax laga qabsan karo
Xayeysiinta ku saleysan macnaha guud ee la adeegsanayo AI waxay ka dhigeysaa summad la mid ah mid la soo celin kara, ku habboon isla markaana siinaysa qiimo badan macaamiisha, marka la barbardhigo xayeysiiska lagu bartilmaameedsaday heerka habdhaqanka iyadoo la adeegsanayo cookies-ka saddexaad. Muhiimad ahaan, waxay ka caawineysaa noocyada, wakaaladaha, daabacayaasha iyo aaladaha xayeysiiska inay u rogaan gees cusub xilligii cookie-ka, iyagoo hubinaya in xayeysiisyada ay la jaan qaadayaan waxyaabaha gaarka ah iyo macnaha guud ahaan kanaallada oo dhan, si fudud oo dhaqso leh.
Hore u socoshada, bartilmaameedka macnaha guud ayaa u oggolaan doonta suuqleyda inay dib ugu noqdaan wixii ay ahayd inay sameeyaan - abuuritaanka xiriir dhab ah, dhab ah oo damqasho leh macaamiisha meesha saxda ah iyo waqtiga saxda ah. Maaddaama suuqgeynta ay 'dib ugu laabaneyso mustaqbalka', bartilmaameedka macnaha guud wuxuu noqon doonaa mid caqli iyo nabadgelyo leh xagga hore si loo sii wado farriimaha suuq-geynta ee macnaha badan leh.
Halkan ka raadi wax badan oo ku saabsan bartilmaameedka macnaha guud:
Ka Degso Warqaddeena Cad Cad Bartilmaameedka Macnaha Guud
Tags: server adtv-ga cinwaan looga dhigi karoxayeysiis sumcad-aamin ahCDPMacnaha guudxayeysiiska guudsuuq geynta macnaha guudbeegsiga macnaha guudxisbinimo hypersiyaasad sarreysakhaldaneex siyaasadeeddareenka gaarka ahbarnaamijkacunsuriyaddacookies saddexaadsunta
PowerInbox: Qalab Dhamaystiran oo Shaqsiyeed, Iswada, Fariin Multichannel